SPL Hotspot - Maxaan u baahanahay inaan ogaado? | The Seattle Public Library
Soomaali : SPL Hotspot - Maxaan u baahanahay inaan ogaado?
SPL Hotspot - Maxaan u baahanahay inaan ogaado?
Riix oo celi Batoonka Daaridda. Uma baahnid inuu ku xirnaado fiilada korantada - waxaa loo isticmaala in shayga dib loo siiyo quwad.
Sug ilaa iyo 30 ilbiriqsi ilaa iyo inta uu ka gudbayo dhowr muqaal shaygu.
Waa inaad riixda batoonka Dooro (Select) si aad uga gudubto daawashada “gaaban ee soo dhaweeynta.”
Ogaysiin: Haddii muuqaalkii aad dooratay aanay waxba ka muuqan, dib u soo celi xoogaa adiga oo riixaya Batoonka Daarida. (hoos ha u sii hayn.)
Markii ay shaashadda ka muuqato “Wi-Fi Name/Password” Riix Batoon. Magaca HotSpotka iyo basworka ayaa ka muuqanaya shaashadda.
Qeybta wax ka badelida Wi-Fi oo kombuyuutarka ama qalabka, ka dooro magaca HotSpot iyo ku qor basworka HotSpot-kaas.
ISTICMAALKA: Si fudud u taabo batoonada halka hoose uga yaala qalabka si aad u aragto muqaalo kala duwan. Qalabkaan ma laha shaashad la taaban karo.
DIB U DARIDA SHAYGA: Haddii aad la kulanto wax dhibaato ah, isticmaal fiilada waraaqaha ku riix batoonka daarida. Batoonka daarida waa mid saddex geesood yar ah oo waxaa ku qoran “reset” daboolka gadaale korkiisa.
QORAALADA: Qalabkaan ma uu celiyo warbixinta. Waalidiinta iyo xanaano bixiyayaasha ayaa masuul ka ah inay la socdaan sida ay carruurtoodu u isticmaalayaan internetka.
HotSpot Waxa uu u ogolaanayaa in lagu xiro Wi-Fi ilaa iyo 15 shay.
FEE: $199 qarash ah ay ayaa lagu soo dalacayaa xisaabtaada maktabadda haddii aad dhumiso ama dhawacdo qalabkaan.
LA SOODAAHIDA: Helitaanka Internetku waxa uu istaagayaa 24 saacadood gudahood markii la dhaafo maalinta laga doonayay.
DIB U JAAJGAREENYNTA SHAYGA: Fadlan si buuxda u soo jaarji garee kahor inta aadan shayga soo celin. Waxaad u baahan doontaa fiilo iyo godka korontada bixiya oo labo qaybooda. Fiiri daboolka la wareejiyo ee dhinac shayga uga yaal. Iyadoo dhinaca HotSpot uu kugu aadan yahay dhinac u riix daboolka shayga dhiniciisa bidixa. Iskugu xir sida lagu muujiyaya. Gelli godka korantada ilaa ay shaashadiisa ka muuqato inuu batarigu 100% yahay.